Faallo: 8-Caqabad oo Kheyre ka hortaagan Madaxtinimada Soomaaliya! – Soomaali 24 Media Network
Posted on November 21, 2020 Leave a Comment on Faallo: 8-Caqabad oo Kheyre ka hortaagan Madaxtinimada Soomaaliya!
Saaxiib la’aanta siyaasadeed ee haysata ololaha ra’isal wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ma aha mid cusub, sida ay sheegeen la-taliyeyaashiisii siyaasadda iyo kalkaaliyeyaashii kalashaqeynayey xiriirka bulshada caqabadahani lama kowsan damaca iyo musharaxnimada Kheyre ee xilka madaxweynaha doorashooyinka 2021-ka.
Hasa yeeshee intooda badan waxa ay ka dhasheen habdhaqankiisii siyaasadeed intii uu joogay xafiiska February-2017-July-2020, kaas oo kudhisnaa siyaasadda Qamaarka ee maanta guuleyso berrina khasaar(Win today lose tomorrow) taas oo lahubo in ay siyaasiyiinta ku dhaqma u horseeddo cawaaqib-xumo siyaasadeed oo sababta heer gaarsiisan in ay guud ahaan lumiyaan kaalintooda siyaasadda, Bulshada iyo in aysan dib dambe uga soo muuqaan golayaasha dowaladaha ku dhisan nidaamka tala-wadaagga.
Jilayaasha siyaasadda, hoggaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka, xubno katirsan bulshada rayidka iyo warbaahinta oo dhammaantood la kulmay lana dhaqmay Kheyre ayaa si weyn u aamisan in caqabadaha iyo culeyska dhinaca siyaasadda ee ka dhashay hab-dhaqankii hore ee Xasan Cali Kheyre ay sababi karaan in uu ka haro tartanka iyo musharaxnimada xilka madaxweynaha.
Xitaa haddii uu ka qaybgalana loolanka waxa adag sida ay qabaan in uu helo dad aamina iyo saaxiibo siyaasadeed oo ku kalsoon ama wax la wadaaga! Kalsooni iyo aaminaad la’aantu waa caqabado lama-dhaafaan ah oo sal iyo asaas u ah siyaasadda Qamaarka.
Kalsooni la’aanta siyaasadeed ahaysata ololaha Kheyre waxa ka soo jeeddaa laba dhinac o oleh miisaan siyaasadeed iyo culeys saameyneed, dhinacyadaas midkood waa xukuumadda Nabad & Nolol oo uu katirsanaa! taas oo si xun uga erisay xilkii uu hayey midka kalena waa madaxda Xisbiyada mucaaradka oo inta la hubo aan Kheyre midkoodna ka haysan kalsooni siyaasadeed (political confidence) iyo xitaa saaxiibtimo sahli karta in lala wadaago macluumaadka.
8-da caqabadood ee hortaagan Madaxtinimada Kheyre!
Is-caddeyn la’aanta siyaasadeed
Ra’isalwasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ah sida uu shaaciyey musharax u taagan xilka madaxweynaha doorashooyinka 2021-ka, waxa uu guulaha iyo gaabisyada siyaasadeed la wadaagayey lana qaybsanayey xukuumadda Nabad & Nolol.
Hasa yeeshee laga soo billaabo sidii uu uga madax-adeygay soo jeedintii uga timid dowladda Qatar ee ahayd in uu ka qayb-qaato ololaha dib u doorashada Madaxweyne Farmaajo, taas beddelkeedana uu noqdo doorashada labaad ee Qatar waxa uu wajahayey kelinimo iyo koox la’aan dhinaca siyaasadda ah.
Bishii June ee sanadkan 2020-ka markii uu damcay in uu ficil u rogo hammigiisa siyaasaddana waxa uu galay go’doon iyo ciriiri sababay in uusan kasoo muuqan kulamada siyaasadda, sidaas awgeed markii laga qaaday xilka Nabad & Nolol waxa ay raacday hab siyaasadeed cusub oo si walba uga duwan ugana deggan dhaqankii Kheyre, taas oo macnaheedu yahay in Kheyre lahaa dhammaan wixii dhib iyo xasilooni la’aan siyaasadeed ahaa ee haystay xukuumadda.
Afar bilood kaddib oo laga joogo markii laga eryey xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda, illaa hadda oo uu billow yahay ololaha doorashada Kheyre, marna ma muujin aragtidiisa ku wjahan Nabad & Nolol!
Falanqeeyeyaasha siyaasaddu waxa ay qabaan in is-caddeyn la’aantii Kheyre ee shirarkii Dhuusamareeb 1 & 2 ay sabab u ahayd in uu lumiyo kalsoonida kooxdiisa kaddibna waayo xilka Wasiirka Koowaad! sidaas oo kalena ay sababi karto in uu ka haro tartanka doorashooyinka.
Kaalintii uu ku lahaa Fadeexadda SOMA Oil & GAS
Sida lagu daabacay warbixinta Qaramada Midoobey ee kooxda dabagalka cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya iyo Eretria ayna faafisay BBC World Service Soma Oil & Gaswaxa ay lacag ku dhow Nus Milyan laaluush ahaan u siisay xubno ka tirsan wasaaradda Macdanta iyo Batrolka Soomaaliya si ay wax ugu fududeeyaan Soma Oil & Gas.
Warbixinta Qaramada Midoobey oo khuseysay laaluushka Soma Oil & Gaswaxa ayaa loogu aqoonsaday in uu ahaa boob iyo tuuganimo halis ah (Serious Fraud).
Shirkadda Soma Oil & Gas oo la aas-aasay sanadkii 2013-kii waa shirkad Shidaal oo Ingiriiska laga leeyahay, isla markaana fadhigeedu yahay London.
Waxaa aas-aasay hoggaamiyihii hore ee xisbiga Muxaafadka Ingiriiska Michael Howard, balse goor dambe waxa la ogaaday in Soma Oil & Gas ay ahayd shirkad tuugo ah oo loogu tala-galay dhaca iyo boobka shidaalka Soomaaliya.
Kiiska Badda oo uu ka iska fogeeyey muddo saddex sano bar ah
Saaxiibtinimada kala dhexeysay Xasan Cali Kheyre madaxda dalka Kenya ee muranka geliyey qayb kamid ah Badda Soomaaliya iyo xiriirka wanaagsan ee uu la lahaa Waddanka uu ka haysto dhalshada ee Norway oo Kenya ku taageerayey in ay sheegato Badda Soomaaliya ayaa sababay in uu faraha ka qaado guud ahaanba arrimaha la xiriira muranka ka dhashay dacwadda Badda, sidaas awgeed galka kiiska Badda Soomaaliya waxaa lagu wareejiyey Ra’salwasaare ku xigeenka garyaqaan Mahdi Maxamed Guuleed oo dhalshada labaad ka haysta Itoobiya.
Sida ay xaqiijiyeen la taliyeyaashiisu Xasan Cali Kheyre muddo saddex sano iyo bar ah si uu u ilaaliyo danaha dowlado shisheeye waxa uu dayacay danta Qaranka Soomaaliya, taasina waxa ay ka dhigan tahay caqabad weyn oo calaad su’aal saari karta sida Xasan Cali Kheyre ugu tartami karo xilka ugu sarreeya dalka uu danihiisii u dayacay hirgelinta danaha Waddan kale.
Eedihii uu galay intii uu xilka hayey:
Sida ay faafiyeen siyaasiyiin kala duwan Xasan Kheyre waxa uu galay eedo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale! Kuwaas oo uu si gaar ah ugu geystay siyaasiyiin ay saaxiib iyo haybba wadaageen! Sida weerarka loo tirinayo in uu lahaa amarkiisa ee lagu qaaday guriga hoggaamiyaha xisbiga Wadajir December-2017-kii.
Sidoo kale dhaqaale ahaan waxa uu si aan sharciga waafaqsanayn u cunaqabateeyey xubno ka tirsan saaxiibadiisii hore ee Qabyo, kooxdiisa hore oo sida ay sheegeen u galay abaal weyn waxa uu ku qaaday dagaal siyaasadeed oo uu u adeegsaday magaca dowladda kaas oo ay adagtahay in si dhib yar la isaga difaaco, eedaha la xauusto waxa kamid ah sida uu u maareeyey heshiisyadii saadka iyo cuntada ee ciidanka xoogga dalka.
Sida uu sheegay Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari guddoomiyihii golaha shacabka April 2018-kii xukuumadda oo uu hormuud u ahaa Xasan Cali Kheyre ayaa ciidan gelisay xarunta golaha shacabka, kaddib murankii ka dhashay mooshinkii xilka looga tuurayey Jawaari oo la tuhunsan yahay in xukuumaddu hindistay, iyada oo adeegsaneysa xildhibaano ka tirsan xukuumadda.
Jawaari ayaa yiri, “Xilligaas aad ayaan uga welwelay wareerka ka taagnaa golaha shacabka. Wixii dhacay ee dhibaato ah shirka bari, anaga mas’uul kama nihi, waxaana mas’uul ka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaanan culumada iyo ururada bulshada ka codsanayaa in madaxweynaha lala hadlo, iskana dhaafo dhinaca uu jiro, dhexdhexaad ka noqdo,waajibaadkiisa dastuuriga ahna uu guto”.
Koox la’aanta Shaqo
Xafiiska Ra’isal wasaaruhu xilligii Xasan Kheyre waxa uu noqday xafiis miisaan ku leh jaangoynta iyo socodsiinta howlaha xukuumadda, waxa uu gaaray heer uu si buuxda ula socdo una kormeero dhammaan shaqada maalinlaha ah ee wasaaradaha, sababtu waxa ay ahayd koox cusub oo shaqada RW ku soo biirtay intii u dhexeysay 2017-2019, kuwaas oo u kala qaybsnaa waaxyo wadashaqeeya oo isku xiran.
Kooxda Shaqada ee XRW oo isugu jiray rag iyo dumar waxbartay waxa ay horseedday in Xasan Kheyre yeesho saameyn iyo muuqasho siyaasadeed oo shaki gelisay madaxtooyada.
Hasa yeeshee Kheyre markii xilka laga eryey waxa uu ku guul-dareystay in uu kooxdiisa shaqada isku hayo sidaasna waxa uu kulumiyey kalkaaliyeyaashiisii ay kamidka ahaayeen garyaqaan Cumar Dhegey, Samiira Qaacid, Cabdiraxmaan Shariif iyo la taliyeyaal muhiim u ahaa ololihiisa, kuwaas oo sida ay sheegeen ogaaday in caqabadaha haysta ololaha iyo musharaxnimada Kheyre ay tobonaan goor ka badan yihiin fursadaha uu heli karo.
← Qalbidhagax oo ka hadlay cidda qaadeysa mas’uuliyada in loo dhiibay Itoobiya iyo musharaxnimada Kheyre
Maxay ka wada-hadleen Cabdikariin Guuleed iyo guddoomiye Cabdi Xaashi? →